Cabdiqabi Xuseen waa wiil markii aan qiyaasay aanay da’diisu ka weynayn labaatan jir. Waxa uu ku nool yahay degmada Maxamuud Haybe ee magaalaada Hargeysa. Waa wiilka ku dhaqaaqay tallaabada nafhurnimada ah ee uu ku badbaadinayey labada nafood ee kale. Waxana uu hawlgalkan badbaadinta ah sameeyey dhawaan markii roobka baaxadda weyni ka da’ay magaalada Hargeysa, ee daadku qaaday qoyskii deggennaa balliga Qudhacdheer ee is la degmada Maxamuud Haybe ee magaalaada Hargeysa.
Posted by HeersareMuxumed at 3:12 AM No comments:
Posted by HeersareMuxumed at 5:09 PM No comments:
Posted by HeersareMuxumed at 6:16 AM No comments:
Posted by HeersareMuxumed at 7:42 AM No comments:
Posted by HeersareMuxumed at 1:05 PM No comments:
Gudagalka Xilliga Caleen-daadashada + Sawirro
Waxa la galay oo lagu jiraa xilligii dayrta. Waa waqti u kala duwan deegaaanada iyo bii'adaha qaaradaha caalamka.
Posted by HeersareMuxumed at 4:40 PM No comments:
Posted by HeersareMuxumed at 3:31 AM No comments: